Isticmaalayaasha Caafimaadka, Faashadda iyo Cajaladaha, Faashadda Caafimaadka - ASN
Anti-coronavirus (COVID-19) Caafimaadka & Qaybta ...
Dharka La-Taqaarooro La-Tuuri Karo ee Dharka Nabadgalyada ...
Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. waa shirkad hal-abuur leh oo isku-darka R&D, naqshadeynta iyo wax soo saarka. Waxay leedahay 15 shatiyadeed oo u gaar ah waxayna ku dhawaaqeysaa shirkadaha tikniyoolajiyadda sare. Waxay leedahay shahaadada nidaamka ISO 13485, shahaadada EU CE, shahaadada US FDA, waxayna kaqeybqaataa carwooyin badan oo ganacsi ajnabi ah sanadkasta. Waxay inta badan soo saartaa alaabo shati leh sida faashado caafimaad oo cusub, faashadda dayactirka, iyo faashadda ilaalinta dhuumaha batroolka.
Jeremy Guan, maareeyaha guud ee Huaian ASN teknolojiyadda caafimaadka CO., LTD wuxuu siiyay khuseeya hogaamiyaasha Xafiiska Huai'an Technology Bureau oo u yimid shirkadeena baaritaanka iyo baaritaanka si diirran loogu soo dhoweeyay Ogosto 26th. Hoggaamiyeyaasha ay khuseyso ee Xafiiska Teknolojiyada dhageyso ...
1. Adkeysi saa’id ah iyo culeys fudeyd: adkaanta kabniinka ka dib markuu bogsado ayaa 20 jeer ka badan kan malaas dhaqameedka. Muuqaalkani wuxuu hubiyaa in la isku halleyn karo oo la adkeyn karo ka dib dib-u-hagaajinta saxda ah. Qalabka hagaajinta ayaa yar oo culeyskuna waa fudud yahay, oo u dhigma 1/5 miisaanka ...
1. Hagaaji qaybta dhaawacmay oo ku duub suufka suufka; 2. Fur boorsada baakadaha ee cajaladda lagu shubay oo faashadda ku dar biyo heerkulka 20 of ~ 25 ℃ ilaa 4 ~ 8 ilbidhiqsi 3. lagu qasbay inuu tuujiyo biyaha, hal duub waa in loo adeegsadaa in lagu kala furfuro liiska kale ...
halkan waad nala soo xiriiri kartaa!